နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ကြားဖို့ စိတ်ဝင်စားသူများ
Posted by Peace at 3:26 PM0comments Links to this post
မနေ့က ပျင်းပျင်းနဲ့ လျှောက်လုပ်တာ သတင်းစာ တစ်စောင် ထွက်လာတယ်။ Tha Wah(Peace) News ဆိုပြီး။ ဟီး ဟီး။ ဖတ်လို့တော့ မရဘူး။ ပုံပဲ ရှိတယ်။ စာဖတ်သူတွေလဲ လုပ်ချင်လား။ လုပ်ချင်ရင် ဒီဝက်ဆိုက်မှာ သွားလုပ်လေ။ အများကြီးပဲ။ တခြားပုံတွေမှာ မိမိရိုက်ထည့်ချင်တဲ့ စာသားတွေ ရိုက်ပြီး previwe လေးကို ကလစ်လုပ်ရုံလေးပဲ။ လုပ်ပြီးရင် ဓာတ်ပုံပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီး Save လုပ်လိုက်ရုံပဲ။ ကဲ သတင်းစာ စောင်ရေ များစွာ ထုတ်နိုင် ဂျာနယ်လစ်များ ဖြစ်ကြပါစေ။
Posted by Peace at 3:01 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 2:54 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 2:46 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 9:36 PM0comments Links to this post
ဆိုလိုတာကစက်ကိုအသုံးပြုတဲ့လူက Password တွေနဲ.၀င်တာကိုပိတ်ထားတက်ကြပါတယ်။
Posted by Peace at 9:31 PM0comments Links to this post
ကျွန်တော်တို. Password တွေရိုက်တဲ့အခါမှာအမဲရောင်အလံုးတွေပေါ်တာ
ပေးမယ် Software လေးပါ။ဒီနေရာကနေ Download ရယူနိူင်ပါတယ်။ယူပြီး
ပါက Zip File ကိုဖြည်ရပါလိမ့်မယ်။ဖြည်ပြီးပါက သော့ပုံကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
အသုံးပြုလို.ရပါပြီ။မိမိကြည့်လိုသော Password ပေါ်သို. လက်ပုံပေါ်ရှိစက်ကွင်း
နှင့်ချိန်ထားပါ။ပြီးလျှင် လက်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါက Pwd မှာဖော်ပြပါလိမ့်မည်။
Posted by Peace at 9:21 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 11:29 AM0comments Links to this post
English Text တွေကို အသံထွက် နားထောင်ချင်ရင် အခုဖော်ပြတဲ့ ဆော့ဝဲလ်က သင့်တော်ပါတယ်။ မိမိတို့အနေနဲ့ Listen Skill အတွက် English အသံထွက်ကို များများနားထောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ English စာမှာ Listening, Speaking , Writing တို့နဲ့ ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ။
လေ့ကျင့်မှုတွေထဲမှာ Listening က ဦးဆုံးဆိုတဲ့အတွက် Listening နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ English Text Speak ဆော့ဝဲလ်လေးကို ဖော်ပြပေးခြင်းပါ။ အသုံးဝင်တဲ့အတွက် မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီမှာ Download လုပ်ယူပါ။
Posted by Peace at 8:22 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 3:40 PM0comments Links to this post